Ciidamo katirsan AMISOM Oo Xaflad sagootin ah loo sameeyey (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ciidamo katirsan AMISOM Oo Xaflad sagootin ah loo sameeyey (Daawo Sawirada)
Waxaa shalay Munaasabad lagu sagootinayay cutub katirsan Ciidamada booliiska AMISOM lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho, waxaana munaasabadaasi ka qeyb galay saraakiil katirsan booliiska Soomaaliya iyo AMISOM.
Munaasabada ayaa lagu sagootinayay Ciidamo kasoo jeeda Dalka Uganda oo dib ugu laabanaya dalkooda, waxaana Munaasabada lagu sagootinayay Ciidamadaasi ka qeyb galay Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ergeyga Midowga Africa u qaabilsan Soomaaliya .
Ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Danjire Maman Sidikou ayaa sheegay in ciidanka booliska AMISOM ay wax badan ka qabteen amniga Muqdisho, iyaga oo kaashanaya dhigooda booliska Soomaaliya.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Maxamed Xasan Xaamud ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay sagootinta ciidanka loo sameynayo, isagoo xusay in iskaashiga dhex maray ciidanka boliska iyo kuwa AMISOM ay wax badan ka qabteen xaaladda amni ee dalka.
Ciidamada AMISOM ee Munaasabada sagootinta ah loo sameeyay ayaa qaarkood la gudoonsiiyay shahaado sharaf, waxa ayna Garoonka Kubada Cagta ee Muqdisho kusoo bandhigeen dhoolo tus la xariira sida rabshadaha looga hortago.
Maamulaka Ahlusuna Oo Sheegay in ay Maxakamad Soo Taayagaan Weriyaashii u xirnaa